Mashandiro eSorare, yepasirose nhabvu nhabvu inomhanya paEthereum - Cazoo
Mashandiro eSorare, yepasirose nhabvu nhabvu inomhanya paEthereum
musha » musha » Mashandiro eSorare, yepasirose nhabvu nhabvu inomhanya paEthereum
Tag: Yese-kutenderera mamaki, NFT, Asina fungible tokeni, Sorare, Makadhi emubairo, Sorare kadhi risingawanzo, Sorare Super Rare Makadhi, Sorare Yakasarudzika Makadhi
Sorare mutambo wekufungidzira wenhabvu unomhanya Ethereum. Ini ndoda kunyora mitsara mishoma kuti ndinzwisise mashandiro eSorare, uye ndinofunga diki gwara rinobuda mairi kuvaka timu yako uye kutanga.
Kana ino inguva yako yekutanga kuverenga mitsara iyi, yasvika zvakanaka.
Pano, mune aya mapeji, ini ndinogovana pfungwa dzeiyi crypto nyika neCazoo. Kana iwe uchida zvemukati mangu uye ukadzidza chimwe chinhu nekundiverengera, ndiri kufara. Kugovana kunotarisira! Zvakare, kana iwe uri kufunga kusaina kuSorare, ita saizvozvo nekutevera iyi link: sorare.com. Uye hongu, iko kutumira chinongedzo. Asi vimba neni, iwe uchave nebhenefiti huru - isu tichazozviona gare gare.
Haudi kusaina nekodhi yangu? Zvakanaka enda kugoogle utsvage imwe zvakadaro!
Sorare ndeye blockchain-based fantasy nhabvu mutambo
Kugadzirisa account yako
Kuwanda kwemakadhi eSorare
Nei ndichifanira kuva neSorare virtual makadhi?
Ini ndinogadzira sei timu yangu paSorare?
Chii chinonzi Rookie League?
Chikwata chakagadzirwa sei?
Mitambo inotambidzwa riini paSorare?
Zvikwereti zvinoverengerwa sei?
Mutambi Score anoverengwa sei?
Ndeipi mibairo yemitambo yeligi vhiki?
Sorare inoshanda sei? Sorare inotora mukana wekuzivikanwa kwemakadhi enhabvu anotamba makadhi, sekunge iwo mapepa ePiniini epasi rose, uye mitambo yekufungidzira yeligi, ichibvumira vatambi kuchinjana makadhi mumwe nemumwe, kutora chikamu mumakwikwi uye kuhwina mibairo. Zvese zvinoshandisa NFT, Zvisingaonekwi Zviratidzo, kana zvigadzirwa zvemadhijitari zvinotorwa.
Iyo yekufungidzira nhabvu mutambo unomhanya paEthereum blockchain uye inoshandisa NFT, zvinoratidzika kushomeka tokeni, nekudaro ine inogona kukura kukosha.
Pfungwa yekuvhuna yaSorare, yavo yakasarudzika bhizinesi modhi, yawana rutsigiro kubva kumakambani akakosha seConenSys, Ubisoft neOpta, pamwe nerambi girini, uyezve kutora chikamu, kweyepasi rose nhabvu indasitiri. Nyeredzi yeBarcelona Gerard Piqué mutyairi mukambani iyi, uye mazhinji emakirabhu enhabvu anozivikanwa pasi rese akanyorwa zviri pamutemo mumutambo uyu.
Iri gwaro rinotsanangura maitiro ekuvaka timu, kutengesa uye kuhwina paSorare, zvese uchinakidzwa nezvakanaka zveyakavhurika uye yakatemerwa network.
Kugadzira account paSorare kuri nyore.
Unobatana ne kero iyi, uye iwe unofanirwa kupa email kero, password uye zita remadunhurirwa (rinozova zita rako meneja), kana iwe unogona kupinda neakavapo Google kana Facebook account (iyo inozivikanwa social login). Nei uchishandisa kodhi yekutumira: nekuti iwe uchagamuchira isingawanzo kadhi! Izvo hazvizopiwe nekukasira, asi mushure mekunge watora vatambi vashanu kubva kuMusika.
Iwe unogona ipapo kukumbira gumi emahara emunharaunda makadhi nekukurumidza paunopinda.
Kadhi reSorare rinobvumidzwa zviri pamutemo chinhu chevatori vemadhijitari kubva kumutambi wenhabvu kune imwe nhabvu mwaka.
Kutenda kune blockchain tekinoroji vese vateveri vanogona kuunganidza avo vavanofarira vatambi nezvibatsiro zvekuratidzika kushomeka (yakatarwa zvitengeswa). Zvakare, maSorare Makadhi anokwanisa kuchinjaniswa uye anoshandiswa mune yakavhurika nyika yekushandisa kwakasiyana nemitambo: isu tanga tichiti Ubisoft yakaroora chirongwa ichi, handiti? Kwete izvozvo chete, akagadzirawo mutambo wake weligi uye weligi inogona kuwanikwa neSorare Cards. OneShotLeague. Imwe neimwe inounganidzwa inonakidzwa nezvakawanda zvehunhu hwemidziyo inowanikwa pane blockchain: haigone kuteedzerwa kana kubiwa. Vashandisi vanonakidzwawo nekuwana iyo yakazara kadhi yedhijitari nhoroondo. Kwemwaka wa2020-21, pane matatu matanho ekushomeka kwega yega Kadhi yeSorare: Yakasarudzika, Super Raro (gumi makopi) uye Raro (zana makopi).
Iwo matatu kadhi anoshomeka mazinga e Sorare
Dzimwe pro pro matipi ekuongorora kuve nekadhi reSorare:
Yayo inotakurika kudiwa: Kadhi rega rega rinenge riine mwero wakasarudzika wekushuvira uye, nekudaro, wekukosha kwevanhu vakasiyana (inomiririrwa mutambi, serial nhamba, nyika, kirabhu ...)
Kukosha kwayo mumutambo: Pamusoro pechinhu chiri pasi chinotakurika uye kukosha kwemukati mekadhi rega rega, dzinogona kushandiswa kutamba. Sorare inokutendera kuti uishandise mumutambo wake wepasirose wenhabvu unonzi SO5 kwaunogona kuhwina mibairo vhiki rega rega.
Yayo yechitatu bato mutambo kukosha: chiratidzo chekupedzisira ndechekuti maSorare Makadhi ane kukosha mumimwe mitambo, kwete muSorare's SO5 pachayo. Vagadziri veSorare vanofungidzira nyika uko vamwe vaparidzi vemitambo vakavaka zviitiko zvitsva zvinoshandisa zvakare maSorare Makadhi (ona Ubisoft, ona pamusoro).
Paunosaina kuSorare kekutanga iwe uchagamuchira yemakadhi akajairika mapakeji (saka kwete Rare, Super Rare kana Yakasarudzika), sezvo iwe uchipedzisa nhanho yega yega yavo yakapusa uye yakatwasuka pabhodhi maitiro.
Iwo emahara emunharaunda makadhi aunowana anotendera iwe kuti uongorore mutambo uye kujoina timu mune Rookie League, iyo League yeVatangi: iri ligi yakapihwa mamaneja matsva.
Iwo Vatangi veLigi mubayiro mamaneja ane ese Akajairika uye Akajairwa mutambi kadhi mibayiro Iyo Yekutanga League inobvumidza mamaneja matsva kukwikwidza kwemavhiki masere ekutamba, uye iwe unozokwanisa kutora chikamu mumutambo uyu, kana muTraining, kanokwana kasere chete, mushure maizvozvo unozokwanisa kutora chikamu muzvivakwa zvedunhu nedunhu repasi rose. .
Mushure memavhiki masere ekutamba, iwe uchachinja kubva paNewcomer Manager chinzvimbo kuenda kune Nyowani Manager - mune ino nguva yenguva ungangodaro wakunda mashoma Makadhi Emubairo weSorare. Iwe unogona zvakare kumonera maoko ako uye enda unotenga vatambi vatsva, makadhi matsva, mukati Chinjana MusikaMutengesi wekutamisa.
Kujoinha Rookie League kwakaenzana nekubatana nechikwata muLigi.
Chikwata chine 5 slots, uye ese mashanu anofanira kuzadzwa.
Slot yekuzadza kujoina League pa Sorare
1 Mubati wepagedhi
Angangoita 1 Defender
Angangoita 1 Midfielder
Anenge 1 anorwisa
Iwe haugone kushandisa mutambi mumwe chete kaviri!
Kana uine Rare Kadhi muchikwata chako unogona kuritumidza kaputeni wechikwata, uye ndinowana bhonasi yekuwedzera. Makadhi ese anogona kusarudzwa semutungamiriri, kunze kwemakadhi enharaunda.
Kamwe vatambi pavanenge vasarudzwa, timu yako inongochengetedzwa uye ndokuiswa muChikwata chakasarudzwa uye Chikamu!
Tora chikamu mune SO5 Yekufungidzira nhabvu nhabvu svondo rega rega uye uwane zvakakosha zvakakosha • Sorare
Sezvo Sorare iri yekufungidzira nhabvu mutambo, makwikwi ane nhabvu mitambo yakatarwa muhupenyu chaihwo. Makwikwi maviri anoitwa pasvondo:
Kubva Chishanu 17.00 UTC kusvika Chipiri 04.00 UTC
Kubva Chipiri 17.00 UTC kusvika Chishanu 04.00 UTC
Iwe unogona kuwana ruzivo rwese rwemasvondo mashoma anotevera emutambo mu Mitambo Yemitambo kana kamwe chete kusaina, paunobaya bhatani reKutamba.
Iyo yekufungidzira mamaki akaverengerwa mushure mematanho matatu:
Iyo Mutambi Chikwata (HP) uchishandisa matrix echikwata, i.e. iwo mapoinzi ekuita kwemutambi padanho.
Iyo Chikamu Kadhi (CS) kushandisa kadhi rega rega bhonasi (Mwaka, Kaputeni uye Chikamu cheBhonasi)
Iyo Chikwata Chikamu (TS). Iyi ingori huwandu hweako makadhi mashanu emakadhi.
Mutambi Chikwata chinoverengerwa zvichibva nebasa chairo remutambi panguva yemutambo.
Mutambi anohodha paSorare kubvira 0 kusvika 100. Pane peji remutambi, iwe unowana yavo Score yeMutambi yemitambo mishanu yekupedzisira. Kana iwe ukaona chiratidzo DNP, inomiririra "Haana Kutamba", mune iyo mamiriro mutambi anotambira Player Score ye0.
Chikamu chemutambi chinoverengerwa seinotevera:
Mutambi mucherechedzo = Dingindira rekutora + zvibodzwa zvese (kwese-kwakatenderedza), - kana iyo-yakatenderera mamaki isiri, 0 yakawedzerwa.
Il danho rakakosha zvinoenderana nezviverengero zvine chinongedzo chakanangana pamhedzisiro yemutambo senge chinangwa, anobatsira, kadhi dzvuku, nezvimwe.
L 'zvese-zvakapoterera mamaki zvinotora huwandu hwese hukuru panguva yemutambo, izvo zvisina kujeka kuteedzera pane izvo zvinoshandiswa kuverenga zvibodzwa, asi zvakakosha pakuongorora zvakakanganiswa nemutambi pamutambo panguva yemutambo.
Chikamu chakazara chakavharwa pa0 uye chinogumira ku100.
Iwo ese-akakomberedza mamaki akavakirwa pane zvidiki uye zvinowanzoitika zviito mumutambo. Kune akawanda - 39 kana iwe ukasanganisira zviito zvese zvemuchengeti - uye paSorare unokwanisa bhurawuza tafura yese.
Kana Kadhi rako riine mitambo miviri muvhiki iri kuuya yemutambo, yekutanga chete ndiyo ichaongororwa. Iwe unongoona chete mutambo wakatarwa mune yako mutambi mutsara wematanho yeiyo vhiki yekutamba.
ZVAKAITIKA NEGATIVE IMPACT
Gol Chinangwa chako
Batsira Kadhi tsvuku
Chirango chakabvumirwa Chirango chinopesana
Inoponesa pamutsetse Kukanganisa kunova chinangwa kune vanopikisa
Hapana network yakatorwa (Vachengeti chete) Kubvuma zvibodzwa zvitatu kana zvinopfuura (Vachengeti chete)
Kununurwa kwekupedzisira mudziviriri
Muenzaniso wekukanganisa uko zvimwe zviitiko zvinogona kuve nazvo panguva yemutambo wezvese zvakakomberedza mamaki e Sorare
Izvo zvakasarudzika zvezvikoro zveSorare hazvingogumira ipapo, asi hazvisi izvo zvinyorwa zvepepa rangu iri.
Chikwata cheSorare chinozivisa mibairo (ETH + Makadhi) yevhiki yega yega yekutamba uye chikamu chega chega muchikamu cheKutamba chewebsite, pasi pemusoro wenyaya Mubayiro Pool.
Pfungwa yeSorare yakajeka, mumaonero angu. Iko kugona kwekuve nemakadhi aya aripo uye nekuashandisawo mune dzimwe nharaunda nemimwe mitambo kunovhura nyika yezviitiko. Hausi mutambo chete, asiwo nzvimbo yevateresi.
Icho chokwadi chekuti chakasungirirwa kune Ethereum network uye blockchain pamwe inogona kudzikisira kusangana kwayo nevashandisi. Asi ivo vachauya, vachasvika….
Chikwata chiri kumashure kweSorare chinoita kunge chinokwanisa uye chine ruzivo, uye vaviri vakweretesi vakuru vakavavimba: Benchmark neAccel Izvi zviviri hazviwanzo kukanganisa.
Pane zvirongwa zvekuwedzera chikuva, iyo nzira yemugwagwa inofungidzira nzira refu izere neyekuvandudza. Isu tiri munyika nyowani zvekuti haina kana kunyatso tarisira akakwana uye asina matambudziko masisitimu: Ndine chokwadi chekuti timu ichawedzerawo nepuratifomu.
Mukupedzisa, watonyoresa kuSorare? Sununguka iè!
Nyaya inoteveraSorare inopinda rimwe timu, hofori Boca Juniors 🇦🇷
Sorare inopinda rimwe timu, hofori Boca Juniors 🇦🇷